Madaxweyne Cabdiweli oo Puntland kusoo noqday kadib gudashada xajka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne Cabdiweli oo Puntland kusoo noqday kadib gudashada xajka
Madaxweyne Cabdiweli oo Puntland kusoo noqday kadib gudashada xajka
September 15, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali oo saxaafada kula hadlaya Garoonka Caalamiga ah ee Boosaaso. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warbaahinta Madaxtooyada]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Jimce ah dib ugu soo laabtay magaalo xeebeedka Boosaaso kadib bil ku dhawaad oo uu ku maqnaa Sucuudi Caraabiya isaga oo gudanayay waajibaadka xajka.
Madaxweyne Cabdiweli ayaa waxaa Garoonka Caalamiga ah ee Boosaaso kusoo dhaweeyay masuuliyiin dowladda katirsan.
Madaxweyne Ku Xigeenka ayaa ahaa sii hayaha Madaxweynaha inta uu maqnaa.
July 18, 2017 Madaxweynaha Puntland oo balanqaaday in uu gole wasiiro ah oo cusub ku soo dooran doono 21 beri gudahood
August 7, 2017 Madaxweynaha Puntland oo magacaabay golihiisa cusub ee wasiiradda
President Abdiweli returns to Puntland after performing hajj
Mogadishu-(Puntland Mirror) Hundreds of Mogadishu residents on Friday were March in the streets of Somali capital to show support for the new Prime Minister of Somalia, local media in Mogadishu reported. Hassan Ali Khayre was [...]